Fapanginan-jaza | 102 KARA
Amin’izao figadonan’ny tsingerin-taona faha 53 nahazoana ny fahaleovan-tena izao dia hanao hetsika ho an’ny zanaky ny mpikambana ao aminy, ny fikambanana ara-pahasalamana eo amin’ny vondron’ny orin’asa ( association medicale inter-entreprise) eto Antananarivo.
Ankoatra ny zanaky ny mpikambana ao aminy dia hiahy ihany koa ireo kamboty sy ireo tsy
manan-kialofana ary tena sahirana ity fikambanana ity, toy ny ao amin’ny ankany ao Andavamamba, ny etsy Ambohibao-Antehiroka, ny any Ambohidratrimo sy ny hafa ihany koa.
Asaina manao harendrina ireo zaza ireo, ampifalifaliana amin’ny kilalao sy hirahira ary dihy isan-karazany. Ary dia hizarana ihany koa sakafo maivana sy mofo ary vatomamy mba HANAMAIVANANA sy HAMPANADINOINA fara-faharatsiny, ny fahoriana mahazo mahazo azy ireo ankizy ireo.
Atao ahoana fa mba misy an’izay aloha raha oharina amin’ny hafa izay tsy manao na inona na inona mandava-taona, na lasan-kovavany fotsiny koa toa ny haron-tabebaka…
27 juin 2013 - 8 h 02 min Social 781 vues